Ranomainty Ranomaso Ranomasina Sea, Fandinihana momba ny raharaha fanodinana any Marina
Ranomaso avy any amin'ny ranomasina nanovozana lalana tamin'ny famaranana ny volana martsa
Desambra 27, 2013
Ny fanondranana làlan'i Harbour Town Yacht Basin ao amin'ny Nosy Hilton Head dia toa mitohy toy ny nomanina, na eo aza ny fahombiazan'ny mekanika, ireo lesoka sy fanamboarana fantsom-pifandraisana, araka ny tatitry ny fanadihadiana isan'andro.
Nanomboka ny volana desambra 4 hanala ny koveta yacht. Gull Point sy South Beach marinas ary Braddock Cove avy ao amin'ny Sea Pines dia ho rendrika.
Hatreto dia eo amin'ny kianja 56,000 cubic sediment dia nesorina tamin'ny fantsom-baravarana fidirana sy ny vilia ivelany, hoy ny lehiben'ny inspektera sy ny mpitantana ny tetikasa Larry Setzler ao amin'ny GEL Engineering.
Niverina tany am-piasana indray ny Crews taorian'ny fiatoana efatra andro manodidina ny krismasy ary teo am-pandehanana ny lalotra anatiny.
Raha atambatra, ny mpandraharaha Orion Marine Construction Inc. dia mikasa ny paompy sediment mihoatra ny 240,000 metatra toradroa mankany amin'ny tranokala 100 hektara eo am-bavan'ny Calibogue Sound, iray kilaometatra avy eo amin'ny rantsan-tongotr'ilay nosy sy 1.5 km miala ny Nosy Daufuskie. Ny onjam-peo mahery vaika dia tokony hampiakatra ny antsanga ho any an-dranomasina, araka ny filazan'ny US Army Corps of Engineers.
"Manantena izahay fa hamita ny kovetabe yacht amin'ny tapaky ny volana Janoary ary hifindra any amin'ny renirano Braddock Cove ary hamakivaky io dingana io ihany mba hanakorontanana marinas South Beach sy Gull Point," hoy i Setzler ny zoma.
Ny tetikasa manontolo dia tokony ho vita amin'ny fiandohan'ny volana martsa, hoy i Setzler sy Mark King, filohan'ny Club Group, mpitantana mpandraharaha ho an'ny Harbour Town Boat Slip Owners Association.
Ny asa fanadiovana ny lakandrano yacht dia tokony ho vita tamin'ny Krismasy, fa ny oram-be Atsinanana dia nampiato ny fahatongavan'ireo fitaovana efa ho herinandro.
Na eo aza izany, "hatreto, efa mandeha tsara ny zava-drehetra," hoy i King.
Nanaiky i Setzler. Tsy hoe tsy nisy tranga akory ny tetikasa. Voatery nanamboatra fantsom-bavoka vita amin'ny pin-hole ny mpiasa ary nanolo ny ampahany amin'ny fantsona simba amin'ny poti-maimbo sy riprap izay notsentsin'ireo dredge hydraulic. Ny fanadiovana be paompy sy ny loha amin'ny tendrony izay manapaka ao ambanin'ny marina dia ilaina koa.
Nahatratra sy nanamboatra haingana ireo leaks ny Crews, ary tsy nisy na dia iray aza babon-drongony nanangona tao amin'ny toerana boka, araka ny tatitra isan'andro natolotra ireo faty.
"Najanona vetivety ny fandavahana, ary nopotsahana ny rano mandra-pahatongan'ny famoahana sy nanamboarana azy," hoy i Setzler.
Nambarany fa ny fahatapahana mekanika tsy fahampiana ary ny leaks dia antenaina amin'ny fitaovana izay mandeha 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro.
Ny tatitra momba ny fanadihadiana sy ny fisafoana dia mampiseho ihany koa fa ny ankamaroan'ny fitaovana dia ariana any an-dranomasina ho vinavinaina, afa-tsy ny haingam-pandeha 100-metatra toradroa manodidina ny tongotra 5.
Nilaza i Setzler fa mety ho vokatry ny fasika be saika ny 15 mankany amin'ny 18 avo ny haavon-dranomasina izay nesorina avy tamin'ny zoron'ny sisin'ny ivelany, ary mila fotoana hivoahana izany.
"Hanohy hanara-maso azy izahay, ary raha tsy miparitaka amin'ny onja io dia hiditra isika ary hisintona hazo iray handondona azy na hamelatra azy amin'ny trondro," hoy i Setzler.
Ny fiasan-dàlana dia efa nojeren'ny mpanara-maso akaiky, satria io no tetikasa fanokanana tsy miankina voalohany any amin'ny fanjakana avela hanary traboina any anaty rano amoron-dranomasina, hoy ny mpitondra fanjakana.
Ny inspektera dia tsy maintsy manatrika mandritra ny asa rehetra.
Ezaka ny zoma mba hahitana solontena iray avy amin'ny Tafiky ny Tafika an'ny Tafika.
Ny vondron'olona tompon-tsambo sy ny mponin'ny Sea Pines, ary koa ny Sea Pines Resort sy Gull Point ary South Beach marinas no famatsiam-bola.
Nosokafana tao: Ny Island Packet
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetik'asa fanaraha-maso port